China FK807 Automatic kwụ Now Bottle Labeling Machine ụlọ ọrụ na ndị na-ebu ya | Fineco
FK807 Automatic kwụ Now Bottle Labeling Machine
FK807 adabara maka ịkọpụta obere ngwaahịa dị iche iche na ngwaahịa ndị a na-ahụ anya, dị ka karama ịchọ mma, obere karama ọgwụ, karama rọba, PET gburugburu karama 502 gluu karama akara, ọnụ mmiri mmiri mmiri na-ede aha, ịdebanye aha lipstick, na obere ndị ọzọ gburugburu karama wdg A na-ejikarị ya eme ihe na karama akara na nri, ihe ịchọ mma, ị wineụ mmanya, ọgwụ, ihe ọ beụverageụ, ụlọ ọrụ kemịkal na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, ma nwee ike ịghọta akara ngosi semicircular.
Igwe njirimara FK807 nwere ike ịchọpụta akara izu zuru ezu na akara izu izu, yana aha akara aha abụọ na ihu na azụ nke ngwaahịa ahụ, na ịpịpụta oghere n'etiti aha ihu na azụ nwere ike gbanwee.
arụ ọrụ ụkpụrụ: PLC na-eme ihe mgbaàmà ngwaahịa na akara ngosi akara ngosi, wee mepụta mgbaàmà na igwe traction iji malite ịkọ aha.
Usoro nyocha: Tinye ngwaahịa na ngwaọrụ nri → A na-ekewapụta ngwaahịa ndị ahụ n'otu n'otu → Ngwaahịa na-ebufe ngwaahịa ahụ → Ihe mmetụta ngwaahịa na-achọpụta ngwaahịa ahụ → PLC na-enweta akara ngosi ngwaahịa ma malite ịkọ aha → onye na-ebufe ihe na-eziga ngwaahịa ndị akpọrọ gaa nchịkọta efere.
FK807 nwere ọrụ ndị ọzọ iji nwekwuo nhọrọ:
A-can Enwere ike ịgbakwunye igwe ihe eji eme nhọrọ na isi akara, a ga-ebipụkwa ogbe mmepụta, ụbọchị mmepụta na ụbọchị mmebi n'otu oge. Belata usoro nkwakọ ngwaahịa ma melite arụmọrụ nke ọma.
Usoro mgbanwe nke FK807 dị mfe. Ọ na - anabata usoro ntinye aha sponge, nke enwere ike ịkpọ ya dịka ọnọdụ ngwaahịa si dị. Ngosipụta akara aha dị elu, ogo dị mma, na ọsọ dị ngwa. O siri ike iji anya nkịtị hụ njehie ahụ. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ngwaahịa dị elu.
FK807 na-ekpuchi ebe ihe dịka cubic 2.22.
Speed ​​Labeling ọsọ (PC / min): 100 ～ 300pcs / min (mmetụta nke ngwaahịa na labeelu)
Product Ngari Ngwaahịa Dị Mma: φ10mm ～ φ30mm; (Anyị nwere ike ime ka ọ dị ka sample gị dayameta)
Size Oke akara aha kwesịrị ekwesị (mm): ogologo: 20mm ～ 250mm; Obosara: 20mm ～ 110mm
Arọ (n'arọ): ihe dị ka 200kg
◆ Ike (W): 940W
◆ Ngwaọrụ (mm) (L × W × H): banyere 2100mm × 750mm × 1400mm
Label Ndidi Lmm
Ike (PC / niin) 100 ~ 300
Ezu karama size (mni) 010 ~ 030; Enwere ike ịhazi ya
Suit labeelu size (mm) L ： 20-290 ； W (H) ： 20-130
Ngwaọrụ Sizc (L * W * H) 2100 * 720 * 1450 (mm)
Ngwugwu ibu (L * W * H) ^ 2010 * 750 * 1730 (mm)
Label Roll NJ: 076mm; OD: <26Omm
1 Ngwaọrụ Nri iche iche na ndepụta nri.
2 Ebu zipu ngwaahịa.
3 Ugboro abụọ n'akụkụ Guardrails mee ka karama ahụ kwụ ọtọ, enwere ike ịhazigharị dịka dayameta nke karama ahụ si dị.
4 Na-enyocha aha isi nke labelerzgụnyere labeling-winding na-akwọ ụgbọala Ọdịdị.
5 Ihuenyo mmetụ aka arụ ọrụ na ịtọ ntọala
6 Belt Rotary na-akwọ ụgbọala ngwaahịa bugharia mgbe ị na-ede gburugburu.
7 Nchịkọta efere nakọta ngwaahịa ndị a kpọrọ aha.
8 Igbe Eletriki tinye nhazi kọmputa
9 Main Gbanye
10 Mberede Kwụsị kwụsị igwe ma ọ bụrụ na ọ na-agba ọsọ na-ezighi ezi
11 Ndị mmezi ejiri gbanwee ọnọdụ aha
Nke gara aga: FK805 Automatic Now Bottle Labeling Machine (Cylinder Typedị)
Osote: FK616 ọkara Automatic 360 Celsius Rolling Labeling Machine
FK835 Automatic Production Line ụgbọelu Labeling ...